I-Cheongju, i-Okhwa University, i-Cheongcheon, i-Miwon, i-Sogu Mountain, i-Mi eshukumayo, kufutshane nehlathi lokuzonwabisa, i-barbecue, i-hearth, i-Netflix ye-100-inch, i-Chabak, i-Bulmong - I-Airbnb
I-Cheongju, i-Okhwa University, i-Cheongcheon, i-Miwon, i-Sogu Mountain, i-Mi eshukumayo, kufutshane nehlathi lokuzonwabisa, i-barbecue, i-hearth, i-Netflix ye-100-inch, i-Chabak, i-Bulmong
Miwon-myeon, Cheongwon-gun, North Chungcheong Province, South Korea
Ikhaya leholide yonke sinombuki zindwendwe onguNagum
Yindlu entle egcwele ukukhanya kwelanga kufutshane neCheongju imizuzu eyi-30, ihlathi lokuzonwabisa, intlambo, kunye ne-arboretum.
Kucetyiswa abo bafuna ukuphumla kamnandi ezandleni zendalo.
Le yindlu ezimeleyo esecaleni kwendlu enkulu, ngoko ungasebenzisa ipuli, indawo yokubasa, indawo yokoja inyama, i-karaoke, i-Netflix ye-100-inch, igadi, kunye ne-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha, kwaye umphathi uhlala kwindlu enkulu, ngoko unokufumana uncedo nanini na ufuna.
I-Jeongnam-hyang-ro igcwele ukukhanya kwelanga imini yonke, kwaye ikwindawo entle kakhulu njengendawo ye-feng shui. Yindawo evulekileyo eyi-200 enee-swings, izinto zokudlala zesanti, njl. ezilungele abantwana ukuba bahambe baze babuke iindawo ebusuku.
Imifuno egadini ifumaneka simahla, kwaye unokubona igumbi lobunewunewu.
Iindawo ezikufutshane ezinjengeentlambo namahlathi okuzonwabisa zikhona.
Indawo yokoja ayivumelekanga ngaphakathi, kodwa kukho indawo yokoja ukuze kufudunyezwe phandle. Ungasebenzisa negumbi le-karaoke elifakwe kwindawo yokoja.
Yiza uphumle ukuze uhlale kamnandi entwasahlobo, ehlotyeni nasekwindla.
Kwisihlomelo esingaphantsi kwendlu enkulu, kukho ityeya enkulu apho unokonwabela umngxuma womlilo, igadi, indawo yokudlala yesanti, kunye neebhola zomlilo phambi kwesakhiwo, kunye nepuli yokuqubha, iambrela yokujinga, njl. zilungiselelwe phambi kwendawo yokungena, igumbi le-karaoke kunye nendawo yokoja zibekwe kwiyadi evulekileyo ye-200 pyeong, kwaye i-steam iyenzeka kwigumbi lobunewunewu kwindlu enkulu.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, 1 iisofa eziyi-, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2
Indawo yethu ikufutshane kakhulu neValley Entertainment Forest Arboretum, indawo ethandwayo ngabakhenkethi.
I-Dongbo-won, i-Geumguan Forest, i-Okhwadae Natural Entertainment Forest, i-Midongsan Arboreum, i-Left Gusan Entertainment Forest, i-Sadam Valley, i-Hwayang Valley, njl. ikude ngemizuzu eyi-15, i-Sangni Mountain, i-Boeun, i-Geonsan Valley, i-Old Road of the Mountain, i-Jeongpyeong, i-Ohchang, i-Chojeong carbonic ephumayo, njl. ikude ngemizuzu eyi-30, i-Cheongju City ikumgama wemizuzu eyi-40, i-Wolaksan Mountain, i-Suanbolidayal Springs, i-Mungyeongsejae, i-Chungju, njl. zikwisithuba seyure eyi-1.
Abathengi abavela eCheongcheon naseMiwon, njl. baza kufumana inkonzo yokukhetha simahla,
kwaye abo basebenzisa i-ktx baya kufumana inkonzo yokuthatha ukusuka kwisikhululo sase-Osong, kwaye ngelo xesha kuya kubakho i-10,000 eyongezelelweyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nagum
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Miwon-myeon, Cheongwon-gun